‘नेता हेलिकप्टर चढेर दुर्गम पुग्न सक्छन्, विद्यार्थीका किताब पुग्दैनन् किन’ ? « Nepal'S Largest Digital Online Newspaper (Magazine)
‘नेता हेलिकप्टर चढेर दुर्गम पुग्न सक्छन्, विद्यार्थीका किताब पुग्दैनन् किन’ ?
मंगलबार बसेको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले सरकारले समयमै विद्यालयमा किताब पुर्‍याउन नसकेको सरकारको आलोचना गरेका छन् । बैठकमा बोल्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद जीवनराम श्रेष्ठले नेताहरू दुर्गममा हेलिकप्टर चढेर पुग्न सक्छन् भने पुस्तक किन पुग्दैन भनेर प्रश्न गरे ।
‘ठूला नेता हेलिकप्टरमा दुर्गम क्षेत्र पुग्न सक्छन् । पुस्तकलाई किन पुर्‍याउन सकिदैनरु यो वा त्यो नाममा एक्स्युज माग्न हुँदैन, यसमा सम्झौता गर्न मिल्दैन,’ श्रेष्ठले भने,‘कि त प्रष्टसँग हाम्रो क्षमता छैन भन्नपर्‍यो । जनशक्ति, साधन स्रोतको अभाव हो कि, नेतृत्वको गैरजिम्मेवारी हो थाहा सबैले थाहा पाउनुपर्‍यो ।’
नेकपा एमाले सांसद योगेश भट्टराईले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको संस्थागत पुनर्संरचना आवश्यक रहेको बताए ।
‘जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको अयोग्यताको कारण आज विद्यार्थीहरूले समयमै पुस्तक नपाएका हुन् । यो लाचारी हो,’ उनले भने, ‘संघीय शिक्षा ऐनको अभावमा धेरै समस्या छन् । यो ऐन तुरून्त ल्याउनु पर्छ । संघीय शिक्षा ऐन तत्काल ल्याउन समितिले निर्देशन दिनुपर्छ ।’
एमालेकै सांसद सरिता न्यौपानेले कुनै नगरपालिका, गाउँपालिकाले चाहँदा पनि शिक्षामा सुधार हुन नसकेको बताइन् ।
‘ऐन नआउँदासम्म शिक्षकको समस्या पनि समाधान हुँदैन । विभिन्न बहानामा शिक्षक भर्ना रोकिन्छ,’ उनले भनिन्,‘किन दुःख गरेर भए पनि अभिभावकले निजी विद्यालय पढाउँछन्, हामीले यसमा किन ध्यान दिएनौं’ नेकपा माओवादी केन्द्रकी अञ्जना विशंखेले दार्चुला, कैलाली, रौतहट, बारा, ललितपुरमा समेत पुस्तक नपुगेको बताइन् ।
‘व्यवस्थापनमा हामी किन यति कमजोर छौं। यसको दोषी को हो,’ उनले भनिन्,‘एकले अर्कालाई दोष दिएर उम्किन खोजिँदैछ ।’
प्रकाशित मिति : असार ७, २०७९ मंगलबार ५ : ०६ बजे